Golaha Wasiirrada oo ansixiyay heshiis ay gaareen wasaaradaha shaqada Soomaaliya iyo Turkiga. |
Golaha Wasiirrada oo ansixiyay heshiis ay gaareen wasaaradaha shaqada Soomaaliya iyo Turkiga.
Muqdisho–Kulan ay maanta Muqdisho ku yeesheen golaha wasiirrada xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu ammaanay guulaha ciidamada xoogga dalku kasoo hooyeen furimaha dagaalka iyo howl-gallada kale ee lagu beegsanayo Al-Shabaab.
Wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka war bixiyay kulankii maanta oo uu shir guddoomiyay Ra’iisul Wasaare Khayre, ayaa sheegay in golaha Wasiirradu ay si gaar ah u bogaadiyeen guulaha ay ciidanku kasoo hooyeen dagaalkii shalay ka dhacay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose iyo sidoo kale khasaaraha la gaarsiiyay Shabaab-kii weeraray ciidanka dowladda.
Wasiir Maareeye ayaa sheegay in shirkii golaha maanta lagu ansixiyeen is-afgarad horay u dhex maray wasaaradaha Shaqada ee dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga.
Heshiiska maanta la ansixiyay oo sida la sheegay ay horay u gaareen Wasaaradaha Shaqada ee Turkiga iyo Soomaaliya, ayaa sidoo waxaa ansixiyay golaha wasiirrada dowladda Turkiga.
Heshiiska ayaa waxaa la sheegay in wasaaraduhu ay isku dhaafsanayaa dhinacyada, dokomiintiyada, taququsyada la xiriira shaqada iyo shaqaaleysiinta, macluumaadka la xiriira shuruudaha iyo wax ka beddelkooda, waxaana la sheegay in guddi wada-jir ah uu ka shaqeynayo fulintinta iyo xaqiijinta arrimaha la xiriira heshiiska.
Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Soomaaliya Sadiiq Xirsi Warfaa ayaa golaha wasiirrada uga mahadceliyay ansixinta heshiiskaas is afgaradka ah, isagoo sheegay in Baarlamaanka uu horgey doono, muhiimad gaarana uu u leeyahay dalka.